> Resource> Utility> otú ndozi newdev.dll Error Loading Esemokwu
Gịnị bụ newdev.dll?
Newdev.dll, dị ka e gosiri site aha ya, bụ usoro mepụtara na-eji maka Windows usoro jikwaa ngwaike ngwaọrụ n'ọbá akwụkwọ. Ụfọdụ omume gaghị arụnyere na ma ọ bụ usoro ga-arụ ọrụ na-enweghị newdev.dll faịlụ.
Mgbaàmà - Error loading newdev.dll
Ọtụtụ internet ojiji kọrọ na newdev.dll njehie pụtara mgbe ha na-wụnye biotek Voyager Modem. N'ezie, newdev.dll njehie ozi ga-egosi n'elu ruru ka newdev.dll mwepụ ma ọ bụ mmerụ. Yiri njehie ozi na-agụnye:
"Newdev.dll bụghị Hụrụ"
"Nke a ngwa okpu-amalite n'ihi newdev.dll ahughi. Re-wụnye ngwa nwere ike idozi nsogbu a."
"The faịlụ newdev.dll na-efu."
"Ike na-amalite xxx. A chọrọ akụrụngwa na-efu: newdev.dll. Biko wụnye xxx ọzọ."
Akpata - Gịnị mere Error Loading Newdev.dll Pụtara?
Dị ka akọwara n'elu, wụnye a ọhụrụ ọkwọ ụgbọala bụ ihe kasị kwere omume mere ka ịkpata njehie ke loading newdev.dll. E wezụga na, ihe mberede mwepụ ma ọ bụ ndekọ njehie ga-eme ka njehie loading newdev.dll.
Solutions - Olee ka Idozi Newdev.dll Error Loading
1. Weghachi Newdev.dll
Gaa egweri biini ịhụ ma newdev.dll bụ n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ee, weghachi ya. Ị nwekwara ike ibudata a newdev.dll maka kpam kpam free si DLL-FILES.com. Mgbe etinye newdev.dll aka nri na ọnọdụ (ndabara c: \_ Windows \_ system32 \_ newdev.dll), pịa Malite / Run, input regsvr32 newdev.dll, na kụrụ Tinye aha newdev.dll na gị usoro. Ị ga-enweta a ozugbo okwu aha ọma.
2. iṅomi Registry
The Windows Registry bụ usoro nchekwa data na-echekwa nhazi ntọala na nhọrọ na Microsoft Windows arụ ọrụ usoro. Usoro, ngwaọrụ ọkwọ ụgbọala, ọrụ, na-echeta na-atọ ndị ọzọ omume niile na-eji Windows Registry. PowerSuite Golden-agụnye ihe ngwa ngwa Registry Cleaner nke nwere ike na-ahapụ gị iṅomi gị windows ndekọ na fix ndekọ njehie. Ọ bụghị nanị ndekọ ngwá ọrụ, ma ihe niile na-na-otu PC Toolkit i nwere ike mkpa fọrọ nke nta niile kọmputa mbipụta.
3. Re-wụnye kwekọrọ ekwekọ usoro.
Dị ka iwebata ná mmalite, mgbe nile ibudata na wụnye ọhụrụ-akwọ ụgbọala. N'ihi na omume na-achọ newdev.dll-agba ọsọ, kpamkpam wepu ya site Control Panel / Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme, na echefukwala ihichapụ faịlụ na nchekwa na nwụnye ebe tupu a ọhụrụ nwụnye.
4. Run Windows Update ma ọ bụ mmalite rụkwaa
Windows mmelite na mmalite rụkwaa (chọrọ Windows Installation Disc) agụnye mbụ na ukara version nke newdev.dll. A ngwọta ga-ịrụzi kwere omume agbajikwa newdev.dll faịlụ.